एनसेल कर छलीमा उपेन्द्र महतोको नाम !! - Aarati Patrika
Home » Featured » एनसेल कर छलीमा उपेन्द्र महतोको नाम !!
in Featured, News, अर्थतन्त्र 2017-03-17	0 162 Views
एनसेल कर छलीमा
उपेन्द्र महतोको नाम !!
एनसेल कर छलीमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर छलीकाण्ड समाचारको खेती त भएकै छ– त्यसमा पनि एनआरएन संस्थापक व्यापारी उद्योगपति उपेन्द्र महतोको नाम पन्छाएर टेलियाको खोजी स्वयंमा विडम्बना पूर्ण भएको कुरा अर्थविद्हरु बताउँदै छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सहयोगी अजय सुमार्गीसँगको साँठगाँठमा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड महतो जोगाउ अभियानमा लाग्नुभएको आरोप पनि खबर बनिरहेछ । अरबौंको कर छली र आर्थिक घोटालाको निराकरण अब संसदीय समिति वा अख्तियारको खोजीमार्फत् होस् बुद्धिजीवीको प्रस्ताव छ । उपेन्द्र महतोका यस्ता खबरले भारतका बाबा रामदेवलाई केही असर पार्छ कि पार्दैन त्यो पनि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको पाइन्छ । हाम्रा संवाददाताबाट
Previous: शीघ्र स्वास्थ्यलाभ होस्
Next: मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लियो